April 5, 2021 - Padaethar
လင္မယားအိပ္စက္ပုံကေန ေျပာျပေနသည့္ အိမ္ေထာင္ေရးအေၾကာင္း
အိမ္ေထာင္ရွင္ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ဗဟုသုတအေနနဲ႔ အိပ္စက္ျခင္းပုံစံကေန လင္မယားႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနကုိ တြက္ဆလုိ႔ရတဲ့ အလြယ္နည္းေလးေတြကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ ခႏၶာေဗဒဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ေဒါက္တာ Patti Wood က ေျပာထားတဲ့ နည္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ (၁) ေရာေထြးယွက္တင္အိပ္စက္ျခင္း လင္မယား, အိပ္စက္ပုံ, အိမ္ေထာင္ေရး ….ေရာေထြးယွက္တင္ အိပ္စက္ျခင္းမ်ိဳးကိုေတာ့ လက္ထပ္ၿပီး ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာတဲ့အထိ အိမ္ေထာင္သည္ေတြ အိပ္စက္တတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ႕ရပါတယ္။ အေနအထားကေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားက ေနာက္မွ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ခါးကိုသုိင္းဖက္ထားတဲ့ အိပ္စက္နည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဓိပၸါယ္ဟာ အခ်စ္နဲ႔ယုံၾကည္မႈ ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာ အျပန္အလွန္ နားလည္ေနေသးတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ (၂) ခပ္ခြာခြာ အိပ္စက္ျခင္း လင္မယား, အိပ္စက္ပုံ, အိမ္ေထာင္ေရး …..ဒါကေတာ့ ပထမပုံစံနဲ႔ မတိမ္းမယိမ္းပါဘဲ။ အမ်ိဳးသားက အမ်ိဳးသမီးကို လက္နဲ႔ … Read more
တစ္သက္လုံး စိတ္ခ်မ္းသာေစဖို႔ ဒီလိုလူမ်ိဳးကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ…
လောကမှာ အချစ်နဲ့လူတိုင်း မကင်းနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ မရပြန်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လက်တွဲတော့မယ်ဆိုရင် အချစ်တစ်ခုတည်းကို ကြည့်လို့မရသလို၊ ရေရှည်မှာ အဆင်ပြေနိုင် မပြေနိုင်ဆိုတာကလည်း တကယ်ကို အရေးကြီးတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမယ့် အရာလေးတွေကတော့ သင့်ဘဝအတွက် အကောင်းဆုံးနဲ့ အသင့်တော်ဆုံး ယောကျ်ားလေးတစ်ယောက်မှာ ရှိနေရမယ့် အကျင့်စာရိတ္တတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် …။ (၁) နားလည်မှုရှိရမယ်” လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားမှာ အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ရှင်သန်ရပ်တည်လို့ မရပါဘူး။ ရေရှည်တည်တံ့ပြီး၊ ရှေရှည်အဆင်ပြေဖို့ဆိုတာက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားမှာ နားလည်မှုရှိမှ ရပါမယ်။ နားလည်မှုရှိတဲ့ယောကျားဆိုတာ သင့်ရဲ့ ပင်ကိုယ်ဗီဇ၊ စိတ်နေစိတ်ထား၊ သင်ရဲ့အမူအကျင့်အားလုံးကို သေသေချာချာသိထားပြီး နားလည်ပေးတဲ့ သူမျိုးကိုသာ ရွေးချယ်ပါ …။ (၂) ရင့်ကျက်တဲ့သူ” ရင့်ကျက်တယ်ဆိုတာ အသက်ငယ်တာ၊ ကြီးတာနဲ့ လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါဘူး။ စိတ်သဘောထား … Read more
ပုရိသေတြ ပထမဆုံး မိန္းကေလးေတြကိုေတြ႕ရင္ သတိထားမိတဲ့အခ်က္(၉)ခ်က္
လူတဈေယာက် နဲ႔တဈေယာက်စေတွ႔ကြပြီဆိုရင် သတိထားမိတတ်တဲ့အရာေလးေတွ ရွိတတ်ကြပါတယ်။ အခုဖောပြှပေးမှာကတော့ ပုရိသ ယောငြျကွားလေးတှ မိနြးကလေး တှကေိုတှေ့ရငြ ပထမဆုံးသတိထားမိတဲ့အခကွြ(၉)ခကွပြဲဖှဈပါတယြ။ (၁) အပြဳံး လွပတဲ့ အပြဳံး ေလးတွေကို ေယာက်င်္ၾကားေလးတွေက အလွယ်တကူသတိပြဳမိတတ်ပါတယ်။ပြဳံးနေတဲ့ မိန်းကေလးတွေကိုလည်း ပိုပြီးဆွဲေဆာင်မႈရွိတယ်လို႔ ယူဆေလ့ရွိကြပါတယ်။ ပြဳံးနေတဲ့ ေကာင်မေလးတွေကိုလည်း ေယာင်္ၾကားေလးတွေက စကားေပြာဖို႔ ပိုမိုရဲတင်းကြပါတယ်။ အပြဳံးဆိုတာ ကူးစက်လွယ်ပါတယ်။သင်ကအခြားတဈေယာက်ကို ပြဳံးပြရင် ျမားေသာအားဖြင်႕ သင်႕ကိုလည်း ပြန်ပြဳံးပြေလ့ရွိကြပါတယ်။ သုတသနေပေါငြးမွားစှာကလညြး အပှုံး တဈပှငြ့ဟာ ကောငြးသဘောဆောငတြဲ့အရာတှကေိုဖှဈပေါစြတယြေ လို့ဆိုပါတယြ။ယောငြျကွားလေးတဈယောကကြ မိနြးကလေး တဈယောကကြိုစတှေ့တဲ့အခွိနမြှာသူမရဲ့စဈမှနတြဲ့ အပှုံး ကိုသတိထားမိတတကြှပါတယြ။ ဒါပမယြေ့ အတုအယောငအြပှုံးဆိုရငလြညြးယောငြျကွားလေး တှကေ အလိုလွောကသြိကှပါတယြ။သငြ့ ခစွသြူ ဘယသြူဖှဈမယဆြိုတာမပှောနိုငသြေးဘူးဆိုရငတြော့ လှလှလေး ပှုံးတတအြောငြ လေ့ကငွြ့ထားသငြ့ပါတယြ။ (၂) မကွလြုံး ယောငြျကွားလေး တှေ မိနြးကလေး တှကေို … Read more
မိနြးမ က လငယြောကွာြးရဲ့ ညာဘကမြှာ အိပရြငြ ယောကွာြးက ဘုနြးကံနိမြ့ပှီး အိမထြောငရြေး မှာ စီးပှားရေးလာဒပြိတစြတယေဆြိုတာ တကယလြား? လငရြယြ မယားရယြ ဖှဈလာပှီဆို တဈအိပယြာတညြး အတူအိပြ ကှရပါတယြ။မိနြးမသားတှဟော လငယြောကွာြး ရဲ့ ဘယဘြကအြခှမြးမှာ သာ အိပခြှငြ့ရှိပါ တယြ……… ဒါပမယြေ့ ဘာဖှဈလို့ မိနြးမသားတှဟော လငယြောကွာြးရဲ့ ဘယဘြကအြခှမြးမှာပဲအိပခြှငြ့ရှိတာလဲ………ဘာကှောငြ့လဲ အမှနဆြို အိပခြငွတြဲ့ ဘကအြိပမြှာပေါ့နောြ…တခွို့ဆို အိပယြာဘေးဘကြ နံရံ ထောငြ့ဘကြ အခှမြးကို မိနြးမသားတှေ ပိုမိုကှိုကနြှဈ သကလြေ့ရှိပါတယြ… ဘေးမှာက နံရံ အတားအဆီး တဈခု ဖှဈသလို ဒီဘကြ ဘေးမှကှ အားကိုးအားထားပှုရတဲ့ လငယြောကွာြး အဲတော့ မှ သူတို့က မိမိကိုယကြို လုံခှုံမှု အပှညြ့နဲ့ စိတခြလွကခြွ အိပစြကနြိုငကြှတာပါ……… … Read more
မှေးထဲကခစွမြှှေးပါလာတာ အငြျဂါသားသမီးလေးတှပေါပဲနောြ … တဈစုံတဈယောကကြို ခစွမြိပှီဆိုရငလြညြး ဘယသြူမှလိုကမြမှီအောငြ ခစွတြတကြတွယခြစွသြူအတှကဆြိုရငြ ကောငကြငကြို ဒူးနဲ့တိုကရြရ သူရဲကောငြးကှီးလုပခြငွတြာ အဂါငြျသာသျမီးတှပေါ .. ။ ဝမြးနညြးလှယတြယမြကွရြညလြှယတြယကြီဈစတဈခုကိုတဈစိမြ့စိမြ့တှေးပှီးတော့တမှညြ့မှညြ့ ခံစားနတတေပြှနတြယြ … ။ ဟာသေပြာပြီး ပြဳံးနေတတ်ပေမယ်႕ရင်ထဲက ကြိတ်ငိုနေတတ်တယ်စိတ်နာေအာင်ေတာ့ သွားမလုပ်မိပါစေနဲ႔ဒူးေထာက်ေတာင်းပန်ေတာင် တဈသက်လုံး ပြန်လွည်႕မကြည်တတ်ေတာ့ပါဘူး.. ။ သူတိုကိုသွားမေၾကာမိပါစေနဲ႔ကိုး ဆယ်ဆေလာက် ပြန်ေျခ တတ်ကႀလိဳ႕ပါမိသားစုအရေသိပ်ကံမေကာင်းတတ်ကျပေမယ်႕မိသားစုက အားကိုးရတဲ့ သားသ္မီးေလးတွေပါသဝန်တိုတတ်တယ် .. ။ ပွောပြွောနြတတေတြယလြူအမွားနဲ့ ဝိုငြးဖှဲ့နရတောထကတြဈယောကထြဲအေးဆေးနရတောကို ပိုနှဈသကကြှတယြ .. ။ ေဒါသဖြဈရင် အပြင်မွာေပါက်ကွဲကြတာထက် ပါးစပ်က ပူညံပူညံနဲ႔ရေရွတ်ေန တတ်ကြတယ် .. ။ လူတှအပေေါြ ဖောရြှစှောနဲ့ခငမြငတြတပြါတယြ …. ။ ဝတျတရားပကွကြှကမြိရငလြညြးအပှနပြှနအြလှနလြှနတြှေးပူနတတေကြှတယြ … ။ မိသားစုတှအပေေါမြှာ ပွောရြှှငမြှုတှပေေးခငွတြဲ့စိတတြှရှေိကှတယြ … ။ … Read more
ရုပ်အဆင်း လှပစေသော ကုသိုလ် (၄) မျိုး လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ ဖြစ်လေရာ ဘဝတို့တွင်သူတစ်ပါးထက် ရုပ်အဆင်း လှပ လိုသူတို့သည်ကောင်းမှု ( ၄ ) ပါး ကိုပြုကြရမည် ဟု ကျမ်းဂန်တို့ ၌ဆိုကြ၏ ။ ထိုကောင်းမှု ( ၄ ) ခုသည်ကား…… ၁။ အဝတ်အစား , သင်္ကန်း လှူဒါန်းခြင်း ၂။ အစာအဟာရ လှူဒါန်းခြင်း ၃။ ဒေါသကို ချုပ်တည်း၍ မေတ္တာပွားခြင်း ၄။ တံမြတ်လှည်းခြင်း ဤ( ၄)ပါးသည် ရုပ်အဆင်းလှပခြင်း၏အကြောင်းရင်း ဖြစ်လေ၏ ။ ထိုကုသိုလ်( ၄ )ပါးကိုပြုပါကရုပ်အဆင်းလှပခြင်းအပြင်သက်ဆိုင်ရာကောင်းကျိုးများကိုလဲ ထပ်မံရသေး၏။ ထိုကြောင့် ဤ ( ၄ ) … Read more